Namaly ny mpanoratra Tom Morris: Raha i Harry Potter no nihazakazaka tamin'ny General Electric | Martech Zone
Namaly ny mpanoratra Tom Morris: Raha i Harry Potter no nitantana ny General Electric
Alakamisy, Aogositra 3, 2006 Alatsinainy, Septambra 23, 2013 Douglas Karr
Tsy mino aho fa hisy andro iray izay tsy dia gaga fotsiny aho amin'ny vokatry ny Internet, Google, ary ny tambajotra sosialy eo amin'ny tontolontsika. Mety ho tena 'geeky' izany saingy nody aho androany ary nisy valiny feno fahasoavana tamin'ny lahatsoratro Tom Morris ' boky, Raha i Harry Potter no nitantana ny General Electric. Vao nahavita ny androko izany! Ny lahatsoratra feno sy ny hevitra avy amin'i Tom dia Eto.
Namidin'i Tom tamin'ny bokiny aho, tamin'ny alàlan'ny fahaizany tsara nanokana fotoana hiarahabana sy hanomezana ambangovangony momba ny bokiny. Impiry no fahitantsika an'izany ankehitriny? Mbola tsy nametaka volom-borona tao amin'ny poketran'i Tom mihitsy aho, fa rehefa nahita ny lahatsoratro tamin'ny alàlan'ny net izy dia tsara ny niarahaba azy. Ny fanokanana fotoana tsy ho an'ny fandaharam-potoanany hamaliana ny lahatsoratro dia efa nilaza tamiko fa ny fampahalalana hovakiako ao amin'ny bokin'i Tom dia hahatanteraka izay kely indrindra holazaina.
Mampihomehy, vao nody avy tao amin'ny fivarotana Verizon aho izay nividianako telefaona volana vitsivitsy lasa izay. Nijanona nandritra ny 55 minitra aho (eny, marina izany), nitsangana nanatrika ny birao aho, ary avy hatrany dia nomena karatra fandraharahana misy nomeraon-telefaona izay mila iantsoako momba ilay findaiko tapaka. Nandany vola be tamin'ireo zalahy ireo aho, ary tsy faly akory ny fahitany ahy!
Fanamarihana iray… Nanoratra tamin'i Tom aho ary nanesoeso azy hoe tsy mpankafy an'i Harry Potter aho, fa manome toky ahy izy fa tsy tokony hanahy aho. Nanoratra izy:
Ny boky dia nosoratana tamin'ny fomba tsy tokony hitadiavana fahalalana na fandom-pahalalana momba an'i Harry Potter. Naheno avy amina bikan'ny CEO aho izay mbola tsy namaky na oviana na oviana ny tenin'i Potter sy izay manoratra nidera ilay boky!
Misaotra tamin'ny mailaka mahafinaritra nataonao! Manantena aho fa hahita ilay boky vaovao mamelombelona sy manaitaitra ny fisaintsainanao bebe kokoa! Ny sasany nilaza tamiko fa ny toko amin'ny lainga dia ny vidin'ny boky fotsiny.
Misaotra, Tom! Aza hadino ny mijery ahy rehefa tonga any Indianapolis ianao. Kafe no ato amiko!
Wikialité, fahamarinana ary fahamarinana
Ny vokan'ny Digg: famaranana… Manampy ve izany?